VIDEO: Lubnaan oo dalbatay gurmad caalami ah – Idil News
VIDEO: Lubnaan oo dalbatay gurmad caalami ah
Waxaa xaalad murugo ah galay dalka Lebanon oo caasimadiisa Beirut ay gil-gileen qaraxyo waa weyn, waxyar un ka hor salaadii Makhrib ee xalay.
Qaraxyada ayaa ka dhashay 2,750 tan oo ah maadada kiimiikada Ammonium Nitrate-ka loo yaqaano, taas oo lixdii sano ee la soo dhaafay ku keydsaneyd bakhaarro ku yaalla dekedda magaalada Beirut. Sidaas waxaa goor dhaw warbaahinta u sheegay Madaxweynaha dalkaas Mishaal Cown.
Waxaa illa hadda la xaqiijiyey geerida 78 qofood iyo dhaawcayada 4,000 qof oo kale, isla markaana waxaa weli socda gurmadka dadka looga soo saarayo dhismayaasha burburay hoostooda.
Ra’iisul wasaaraha dalka Lebanon Xasan Diyaab oo goor dhexe oo xalay ah hadlay ayaa dadka reer Lebanon ka dalbaday inay isu gurmadaan, si loo badbaadiyo dadka dhaawacmay iyo kuwa weli burburka ku hoos jira.
Dhibaato rabaani ah ayuu u sheegay dadkiisa inay ku dhacday, isla markaana ay ku qancaan qadarta Rabbi, iskuna gurmadaan, isaga oo u balan qaaday in dowladdu ay dadaaleyso inta karaankeeda ah.
Waayihii dambe dalka Lebanon waxaa hareeyey dibadbaxayo looga soo horjeedo dhaqaale xumadii ugu darnayd oo taagan, tan iyo dagaalladii sokeeye ee dalkaas ka dhacay, sanadihii 1975-tii illaa 1990-kii, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasna qaraxyadani waa shil ee ma ahan kuwo siyaasadeysan.